ထူးဖောင်ဒေးရှင်းသည် မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ် အတွင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဆိပ္ဖူးတောင် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသို့ ငွေကျပ် သိန်း(၁၃၀၀) တန်ဖိုးရှိ အလှူငွေနှင့် စာရေးကိရိယာပစ္စည်းများကို ယနေ့ စက်တင်ဘာလ(၄)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက သွားရောက် လှူဒါန်း ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ အလှူသို့ ထူးဖောင်ဒေးရှင်း နာယကတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသီဟ၊
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းပညာဒါနဘော်ဒါဆောင် (ပူတာအို) ၏ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား။ ထူးဖောင်ဒေးရှင်း ပညာဒါနဘော်ဒါဆောင် (ပူတာအို) ၏ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို (၁၁.၇.၂၀၁၃) ရက်နေ့က ပူတာအိုမြို့၊ ဒုတ္ထန်ရပ်ကွက်ရှိ ထူးဖောင်ဒေးရှင်း ပညာဒါနဘော်ဒါဆောင် ဧည့်ခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပူတာအိုမြို့ မျက်စိဆေးကုသရေးအစီအစဉ်အတွက်ကြွရောက်နေသော သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာ အရှင်ဥာဏိဿရ တက်ရောက် ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီးထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ နာယကများဖြစ်ကြသော ဦးတေဇ၊
ကန်ပက်လက်မြို့ရှိ ပရဟိတ မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ လှူဒါန်းခြင်း
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ ဦးကျော်သီဟနှင့် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှဝန်ထမ်းများသည် (၁၈.၆.၂၀၁၃) ရက်နေ့က ချင်းပြည်နယ် ၊ကန်ပက်လက်မြို့ရှိ ပရဟိတ မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ကလေးများအတွက် ကျောင်းဝတ်စုံများ ၊စားရေးကိရိယာများ၊ ကျောပိုးအိတ်များနှင့်အလှူငွေများသွားရောက်
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ချင်းပြည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့၊ မြို့မ(၂) ရပ်ကွက်၊ (၁၀) မိုင်ကုန်းအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းခွဲ အတွက်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနားကို (၁၈.၆.၂၀၁၃)ရက်နေ့ ကကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး မြို့နယ် ပညာရေးဦးစီးဌာနသို့
Htoo Foundation is donating stationary, school uniforms Schools at Orphanages and Monastic education school. Educational programs and trainings are given in cooperation with other NGO’s.
Two School Building Donated at Mulasheedi Basic Education High School in Putao